ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | ထိပ်တန်းအပေါက်ဆိုက်ကို | Mobile Casino Online | £€$800 Deposit Bonus :)
ProgressPlay လီမိတက် (အဆိုပါ "ကုမ္ပဏီ") သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့သင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားအချက်အလက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ကျူးလွန်နေသည် (“ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များ& rdquo;).
II ကို. ပြန်ကြားရေးစုစည်းမှု
ကုမ္ပဏီ (ယင်း၏ကိုယ်စားသို့မဟုတ်အခြားသူများ) သငျသညျအနေဖြင့်ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအပါအဝင်, မင်းနာမည်, မွေးရက်, ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်, နေအိမ်သို့မဟုတ်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာ, အီးမေးလိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အခြားဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်. ကုမ္ပဏီ (ယင်း၏ကိုယ်စားသို့မဟုတ်အခြားသူများ) ထို့အပြင်န့်အသတ်အရင်းအမြစ် IP လိပ်စာမပါဘဲအပါအဝင်အချို့သောအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းကြောင်းကိုသင်ဖို့ထူးခြားသော log တစ်ခုလှုပ်ရှားမှုစုဆောင်း, access ကိုအချိန်, လက်လှမ်း၏နေ့စွဲ, ကို web နှင့်မိုဘိုင်းစာမျက်နှာ(s ကို) သွားရောက်ကြည့်ရှု, ဘာသာစကားအသုံးပြုမှု, ဆော့ဖျဝဲပျက်ကျမှုအစီရင်ခံစာများနှင့်အသုံးပြုသော browser ၏အမျိုးအစား.
III ကို. ပြန်ကြားရေးအသုံးပြုခြင်း
အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီကိုအသုံးပြုသည် (ယင်း၏ကိုယ်စားသို့မဟုတ်အခြားသူများ) အဆိုပါန်ဆောင်မှုများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါသငျတို့ထံမှသို့မဟုတ်အကြောင်းကိုစုဆောင်း, ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုပေး, လိုအပ်သောလုံခြုံရေးနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာစိစစ်အတည်ပြုစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ရန်ဖို့, သင့်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအရောင်းအမဆိုစီမံဆောင်ရွက်, အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် / သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်န်ဆောင်မှုများ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်. အဆိုပါကုမ္ပဏီအသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ခြင်းငှါ (နှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များ) ခွင့်ပြုနိုင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီမှန်ဆောင်မှုများကိုမဆိုတတိယပါတီများမှမှ, သငျသညျမှနျန်ဆောင်မှုများ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို enable သို့မဟုတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်. အထက်ပါထံမှ derogating မပါဘဲ, သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများပေး၏ရည်ရွယ်ချက်န်ထမ်းများနှင့် Company ၏ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များမှထုတ်ဖော်လိမ့်မည်, အကြွေးစီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှုများနှင့်လိမ်လည်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးန်ဆောင်မှုများ, to the Company's accountants and auditors for accounting and auditing purposes and to the Company's partners for the purpose of payment processing, သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကုမ္ပဏီအားဖြင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်မည်အကြောင်း,, ယင်း၏လိုင်စင်ရှိနှင့် / သို့မဟုတ်တွဲဖက်ကုမ္ပဏီတွေဟာမဆို (သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားမဆိုဝန်ဆောင်မှုပေးအပါအဝင်) (အားလုံးဖြစ်ခြင်းဟာ "marketers") သငျသညျမွှငျ့တငျရေးကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အချက်အလက်များကိုန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အဖြစ်စျေးကွက်နှင့်အခြားတတိယပါတီများအနေဖြင့်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူပေး, and in order for us to improve the Company's offering ofarange of products and services and improved customer support; ပေးအပ်, သို့သော်, ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များတစ်ခုတည်းကိုသာသင့်ရဲ့ဘေးဖယ်-in ကိုအဆင့်အတန်းအပေါ်စျေးကွက်မှထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း. အဆိုပါမြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းမှုအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းဖြင့်သင်ကပေးစေခြင်းငှါ, ကန့်သတ်အပါအဝင်သော်လည်းမ (ကိုယ့်) အီးမေးလ်က, (ii) တယ်လီဖုန်း, (iii) SMS နဲ့ (ဃ) တိုက်ရိုက်မေးလ်(v) ဆော့ဖ်ဝဲအတွင်းကနေဖွင့်အပိုဆောင်းပြတင်းပေါက်. အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းန်ဆောင်မှုများ၏သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံရန်အ aforesaid သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါနှင့်အခြားပြည်တွင်းရေးရည်ရွယ်ချက်စေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောအကဲဖြတ်အဖြစ်, ပေး, နှင့်န်ဆောင်မှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး.
အဆိုပါကုမ္ပဏီအသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီထုတ်ဖော်စေခြင်းငှါ (ယင်း၏ကိုယ်စားသို့မဟုတ်အခြားသူများ) လိုအပ်လျှင်ပညတ်တရားအားဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုသင်ရာမှသို့မဟုတ်အကြောင်းကိုစုဆောင်း, ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့အရေးယူတစ်ဦးကလက်ရှိတရားစီရင်ရေးရှေ့ဆက်လိုက်နာရန်လိုအပ်သောကြောင်းကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌ယုံကြည်နေမယ်ဆိုရင်, တရားရုံးအမိန့်သို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်ကို, or to protect and defend the Company's rights or property, အဆိုပါန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကို၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံဘေးကင်းသို့မဟုတ်အများပြည်သူ. အဆိုပါကုမ္ပဏီအခြားအွန်လိုင်းဂိမ်းက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူ aforesaid သတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ဘဏ်များ, ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်, နှင့်သင့်လျော်သောအေဂျင်စီများနှင့် / သို့မဟုတ်အားပြိုင်မှု, ကုမ္ပဏီသင်ကကုမ္ပဏီဖိနှိပျဖို့လိမ်လည်လှည့သို့မဟုတ်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီသူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိအတွက်ဆုံးဖြတ်သည်လျှင်, ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီမဆိုလိမ်လည်လှည်လှုပ်ရှားမှုကျူးလွန်၏သင်ဟာသံသယရှိလျှင် (လိမ်လည်လှည်ငွေပေးချေမှုအပါအဝင်), သို့မဟုတ်အခြားတားမြစ်ထားသောငွေပေးငွေယူ.
အဆိုပါကုမ္ပဏီမဆိုသတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းစေခြင်းငှါ (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင်) နေထိုင်ရာသင်တို့ပြည်သည်ပြင်ပမှာနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအပြင်ဘက်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်ပြုလုပ်သိုလှောင်; အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ၏ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အခြားဥပဒေများဥရောပသမဂ္ဂအတွက်သူများကဲ့သို့ပြည့်စုံမကျမည်အကြောင်း - ထိုအဖြစ်ရပ်အတွက်ကုမ္ပဏီကာကွယ်မှုတစ်ခုလုံလောက်သောအဆင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များအားပေးပြီးမှကြောင်းသေချာစေရန်ခြေလှမ်းများယူပါလိမ့်မယ်.
IV. ပြန်ကြားရေး retention
အဆိုပါကုမ္ပဏီနှင့် / သို့မဟုတ်ဗြိတိန်လောင်းကစားကော်မရှင်သက်ဆိုင်သောဥပဒေပြဌာန်းသတ်မှတ်အချိန်နှင့်မော်လ်တာဂိမ်းအာဏာပိုင်များ၏ညွှန်ကြားချက်အဘို့သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များအပေါငျးတို့သထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မယ်, သက်ဆိုင်အဖြစ်. သင်ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များမဆိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွဖျက်ပစ်ရန်ကုမ္ပဏီထံမှတောင်းဆိုနိုင်သည်နေစဉ်, တောင်းဆိုမှုသာနေသမျှကာလပတ်လုံးဒါဟာနှင့် / သို့မဟုတ်ဗြိတိန်လောင်းကစားကော်မရှင်သက်ဆိုင်သောဥပဒေပြုခြင်းနှင့်မော်လ်တာဂိမ်းအာဏာပိုင်များ၏ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်သကဲ့သို့ဖြေကြားပါလိမ့်မည်, သက်ဆိုင်အဖြစ်.
V ကို. ရှေးခယျြခွငျး / ဘေးဖယ်နေသည်
သင့်အနေဖြင့်စကားလုံး & ldquo နှင့်အတူတစ်ဦးအလွတ် e-mail, ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီထံမှမြှင့်တင်ရေးဆက်သွယ်ရေးလက်ခံရရှိထံမှထွက်-ရွေးချယ်မည် Remove” သို့ customersupport@instantgamesupport.com; သင်ကဝင်ရောက်ထွက်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်. သငျသညျ-ဖယ်ထုတ်လျှင်ပင်ကို ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ, ကုမ္ပဏီသင်ဝန်ဆောင်မှု-related နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များပေးပို့ဆက်လက်ဖြစ်နိုင်သည်.
ကုမ္ပဏီ (ယင်း၏ကိုယ်စားသို့မဟုတ်အခြားသူများ) cookies များကိုအဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဘရောက်ဇာကိုအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံး, သငျသညျအခြို့သောအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းစာမျက်နှာများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်ထားရှိသည့်အသေးစာသားကိုဖိုင်တွေထားတဲ့များမှာ, သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံဖို့, သင့်ရဲ့ဦးစားပေးမှတ်တမ်းတင်, နှင့်ကိုသင်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့နှင့်ပိုပြီးစိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံကိုပို့ခြင်းဖြင့်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့န်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုတုံ့ပြန်မှုလုပ်. အဆိုပါ cookies များကိုသင့်ကွန်ပျူတာနှင့် / သို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်သိမ်းဆည်းထားသည်နှင့်အသင်၏အလှုပ်ရှားမှုခြေရာခံများနှင့်သင်ကန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုဖို့အဖြစ်သတင်းအချက်အလက်ရှောက်သွားကူညီဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်. ကွတ်ကီးကုမ္ပဏီသင်ကုမ္ပဏီများကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်အတူလည်ပတ်မှု browsing ထံမှသွားလာမှုသတင်းအချက်အလက်ပေါင်းသင်းဖို့ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီအသင့်လျော်လုံခြုံရေးမူဝါဒများအကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါတယ်, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကနေသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးရန်နှင့်စောငျ့ရှောကျဖို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစီအမံ, မလျော်ကန်သောအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်, ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပြုပြင်မွမ်းမံ, ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောအဗဒ္ဒုန်သို့မဟုတ်မတော်တဆဆုံးရှုံးမှု. All of the Company's employees and data processors that have access to, နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်, သင့်ရဲ့အချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလေးစားဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းနေကြတယ်.
VIII. အခြားအင်တာနက်စာမျက်နှာများမှ links
ကုမ္ပဏီရောင်းစားသောဖြစ်ရပ်အတွက်, assign တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆက်ခံသို့မဟုတ်ရယူမှလွှဲပြောင်းယင်း၏လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကို, ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီကဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်တတိယပါတီနှင့်အတူပေါင်းစည်းလျှင်, သို့မဟုတ်လျှင်ဒေဝါလီခံဘို့ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီဖိုင်တွေကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောဖြစ်လာ, ကုမ္ပဏီရောင်းချစေခြင်းငှါ, သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ကိုသင်သို့မဟုတ်သင်ကအကြောင်းကိုပေးအပ်သည်အခြားသတင်းအချက်အလက်အားလုံး assign သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်း, မသက်ဆိုင်သင့်ဘေးဖယ်အခြေအနေ, ထိုကဲ့သို့သောဆက်ခံသို့မဟုတ်ရယူရန်, ပေးထားသောကုမ္ပဏီသင့်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူ.
X ကို. မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်
အင်တာနက်ကနေတဆင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ဂီယာလုံးဝလုံခြုံမဟုတ်ပါဘူး. ကုမ္ပဏီသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမဖြစ်သော်လည်း, the Company cannot guarantee the security of the data transmitted to the Company's website, မိုဘိုင်း site နှင့် / သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း application ကို; ဂီယာသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်. လျြောညီစှာ, ကုမ္ပဏီ (ယင်း၏ဒါရိုက်တာများအပါအဝင်, အရာရှိများ, ရှယ်ယာရှင်များ, ပေးသွင်း, အကြံပေး, ကန်ထရိုက်တာများနှင့်တွဲဖက်) မဆိုသွယ်ဝိုက်များအတွက်ထိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဖွစျပှား, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပဖြစ်ရပ်များထဲကနေရရှိလာတဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်လွှတ်ပေးရန်နှင့်စပ်လျဉ်းလက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ခတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု.
သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အရေးရှိသည် (ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ် 1998) ကုမ္ပဏီသင့်အကြောင်းစောင့်ရှောက်ကြောင်း, တစ်ဦး၏စာဖြင့်ရေးသားတောငျးဆိုခကျြမြားနှငျ့ငွေပေးချေမှုလက်ခံရရှိအပေါ်သို့ £10 ကြေး. သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသင်အကြောင်းကိုကိုင်သတင်းအချက်အလက်မဆိုမမှန်ကန်ကြောင်းစိုးရိမ်နေကြ အကယ်. မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် customersupport@instantgamesupport.com
ဗားရှင်း 1.1.4 – 08/08/17, နောက်ထပ်သတိပြုပါသည်အထိသက်တမ်းရှိ
slots ဖုန်း Deposit | ကြီးမားထီပေါက် & £800 Bonus!